Filipina: Ilay Jeneraly Miaramila Miteraka Adihevitra Be Indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2018 13:31 GMT
( Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2006)
Voarohirohy amina raharahaefa mihoatra ny an-jatony momba ny fanitsakitsahana zon'olombelona ny Jeneraly Lehibe Jovita Palparan. Niato hisotro ronono tamin'ny herinandro lasa teo izy tamin'ny asa fanompoany ny tafika saingy nivoady ny fanjakana ny hanendry azy tsy ho ela mba hanohizany ny ady ataony amin'ny kaominista.
Niampanga azy ho ”mpanimbin-kena” ireo mpikatroka fa ny Filoha Gloria Macapagal-Arroyo kosa imbetsaka nidera azy ary mbola nanaiky ny tetikadiny niteraka adihevitra be tamin'ny nandreseny ny ‘fahavalom-pirenena’.
Jen. Palparan kosa dia sady tsy nanamafy no tsy nandà ny fandraisany anjara tamin'ilay ‘antoko-miaramilan'ny fahafatesana’ malaza izay namoizana ny ain'ny mpanohitra politika mihoatra ny 700 nanomboka tamin'ny 2001. Manantitrantitra izy fa ‘aingam-panahy’ fotsiny ho an'ilay mpitifitra izy.
Miblaogy mikasika ny ”olana toa an'i Palparan” i Piercing Pens.
Manolotra hevitra kosa momba ny fomba tsy ampiasàna herisetra ‘hisakanana ilay fandrahonana’ i Fullman :
”Satria monina any amin'ny faritra ambanivohitra somary lavitra izy, izay ny biby mavitrika indrindra ny alina no tena miasa tokoa amin'ny alina, ny fomba tokana ahafahana mitazona azy haharitra hatramin'ny ora voalohany amin'ny maraina dia ny fanasàna azy isaky ny alina mba hitsara ireo fifaninanana hatsaran-tarehy pelaka ampanaovinao. Izay ihany no fomba tsy manitsaka ny Fanambaràna Manerantany Momba ny Zon'olombelona… Raha avy any Bulacan, Nueve Ecija na Pampanga ianao, dia manaova hetsika fitiavan-tanindrazana dia asao i Palparan mba hitsarany ny fifaninanana hatsarana pelaka ampanaovinao. Inoy aho, ahem, fa ahafahana misakana ilay loza mitatao izany.”
The Professional Heckler (fanamarihana: rohy tapaka) koa manana tsikera mampihomehy mikasika ilay andro niatoan'i Palparan handeha hisotro ronono.
Hazavain'i Hillblogger ny zavatra mety hitranga raha toa ka mahazo asa vaovao avy amin'ny fanjakana i Palparan:
“Seza ao amin'ny Filankevim-piarovana Nasionaly dia fiarovana virtoaly ho an'i Palparan; miantoka ny fahafahany manao zinona ny fiantsoana ataon'ny mpanao lalàna ilay seza… tsy voatery izy hamaly fanontaniana manodidina ireo fiampagana famonoana tsy nandalo fitsaràna nandritra ny fotoana naha mpitarika tafika azy ary indrindra, manana fahefana ofisialy hametraka ny mpanohitra an'i Arroyo (Filoha) amin'ny fanasokajiana ireo rehetra mpanohitra ho ‘mena’ fotsiny izao izy.”
Malalaka Ny Eritreritray dia manoratra mikasika ny tena lova napetrak'i Palparan ho an'ireo faritra rehetra nanendrena azy: làlana feno rà ary zaza trà-boina. Rava sy Simba ao Manila dia manome ny antsipirihany mikasika ny firaketana ny herisetra vitan'i Palparan. Mampitàha an'i Palparan amin'ireo olon-kafa malaza ratsy ihany koa izy:
“Avy amina taranaka lava sy tsy dia misy dikany loatra izay ahitana ny Mpanjaka Leopold II, Mpanimbin-kena tao Kongo; Idi Amin, Mpanimbin-kena tao Oganda; Ariel Sharon, Mpanimbin-kena tao Sabra sy Chatilla; ary ny Mpanimbin-kena tao Cumberland, ilay mpandresy tao Culloden. Ary ankehitriny i Filipina manana ny mpanimbin-kenany koa.”
Achieving happiness miresaka ny fomba fijerin'ny mpikatroka an'i Palparan:
”Eny eny eny. Mpamono mitohy mitafy fanamiana i Palparan. Raha toa ka manao sarisary momba ny fiasan'ny atidohany sy ny maha-izy azy ary ny ‘izy’ aminy ireo mpitsabo ny marary saina dia mety ho hitan'izy ireo fa tsy hafa amin'ny fironan'i Jack Ilay Mpanokatra Kibo sy Hitler izy. Foka tanteraka, mamono am-pitoniana sy am-pangatsiahana.”
Manatsafa ireo media i Kalovski Itim Online mba hanomezana an'i Palparan ‘endrika malefaka’.
Tena ilaina mba hahatakarana ny toe-javatra misy ny zon'olombelona any Filipina eo ambanin'ny fanjakana ankehitriny ny tranonkala Stop the killings (Atsaharo ny famonoana).
Nizara sarin'i Palparan ny Red star images